Leixlip - N'ime Kildare
Leixlip lere Osimiri Liffey na ugwu Kildare, 17km ọdịda anyanwụ nke Dublin. Gbalịa ịkụ azụ na otu n'ime ezigbo salmon angling tụrụ na-enwe mmasị na ndị mara mma tapestries nke Leixlip Castle. Gaa na Leixlip Manor Hotel iji chọpụta ubi ya dị ọcha, kwụsị site na ịchọ ịmata ihe nke ụlọ dị ka Wonderful Barn ma ọ bụ gaa mkpagharị na Royal Canal Way - nwee ezumike izu ike n'ebe a mara mma.
Leixlip dị na njikọ nke osimiri abụọ, The Rye & the Liffey. Ndị a guzobere ókèala ochie na Celtic nke Ireland gara aga na obodo ahụ metụtara aha ya na Vikings ndị biri ebe a na narị afọ nke 9. Leixlip Castle, ebe siri ike nke Norman, ka dị n'etiti obodo taa ma bụrụkwa nke ezinụlọ Guinness kemgbe 1958. Guinness mbụ, Arthur, malitere ebe a na-eme mmanya mbụ na Leixlip na-eji ụzọ mmiri na-ekesa ihe ojii na-ekesa na ọha mmadụ. Nke a bụ mmalite mmalite maka ụzọ Arthur, ụzọ 16km na-eso ndụ Arthur site na ọmụmụ ruo ọnwụ.
Top nlegharị anya na Leixlip
Choputa ihe na Leixlip
Arts & OmenalaUseslọ & Ubi